यतिबेला सिन्डिकेट गर्ने यातायात व्यवसायीको समूहमाथि राज्यले पुरै शक्ति लगाएको छ । तैपनि नियन्त्रण गर्न हम्मे नै परेको छ । सरकार कम्तीमा यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाउन प्रतिबद्ध देखिन्छ । राजनीतिक रूपमा बलियो सरकारलाई नागरिकहरूको पनि उत्तिकै साथ छ ।
न्युयोर्क सिटीबाट लगभग ५ घन्टाको ड्राइभिङपछि पुगिने एउटा ऐतिहासिक तर सानो ठाउँ छ– कोर्निङ । सोही ठाउँमा ३७ वर्षअघि नेपाली जोडीको तेस्रो सन्तानको रूपमा एउटा बालक जन्मियो । ऊ सानैदेखि ‘जिनियस’ थियो । गणितमा विशेष लगाव थियो । आमा र दिदीहरूसँग पुस्तकालय जान मनपराउँथ्यो । स्कुल छँदा शिक्षकले उनलाई पराग भन्न नजानेर ‘फरग’ भन्थे । उनी भने मेरो नाम ‘फरग’ हैन भन्दै सच्याउँथे । नाम शुद्धसँग उच्चारण नगरेसम्म अड्डी कस्ने उनको बानीले शिक्षिकालाई कायल बनाउँथ्यो । तैपनि उनलाई माया गर्थे । शिक्षकका ती प्रिय ‘फरग’ले सानैदेखि आफूलाई ‘फरक’ रूपमा उभ्याए । र त्यही उभ्याइले उनलाई परिचय दिलायो– स्टार अर्थशास्त्री पराग पाठकको रूपमा ।
नेपाली माटोसँग जोडिएका स्टार अर्थशास्त्री
गएको शुक्रबार अमेरिकन एक्नमिक असोसिएशनले युवा अर्थशास्त्री डा. पराग पाठकलाई सम्मानित ‘जन् बेट्स क्लार्क मेडल–२०१८’ प्रदान गर्ने निर्णय गर्‍यो । यो खबर विश्वका युवा अर्थशास्त्रीका लागि खुसीको कुरा त थियो नै, नेपाली माटोसँग साइनो गाँसिएकाहरुका लागि त झनै गर्व गर्न लायक क्षण ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोगको नेपाल कार्यालयको अभिलेखअनुसार सन् २००८–२०१३ मा मात्रै ४ हजार ४ सय ५१ वटा आमहडताल तथा बन्द भए । तीबाहेक सानो स्तरमा हुने चक्काजाम र हडतालको गणनै थिएन ।
सामाजिक सुरक्षाको राजनीति
सरकारबाट बाहिरिँदै गर्दा मन्त्रिपरिषद्ले वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाएर ६५ वर्षमा झार्नेलगायत निर्णयले समग्र सामाजिक सुरक्षाको मुद्दा पेचिलो बन्न पुगेको छ । नागरिकले सरकारलाई कर तिर्छन् । प्रत्यक्ष रूपमा दिन नसक्नेले पनि कुनै न कुनै रूपमा योगदान गरेकै हुन्छन् ।
रिसाहा नेता र आक्रोशित जनता
भनिन्छ, ‘असल नेता सुन्नमा छिटो र रिसाउनमा ढिलो हुन्छन् ।’ नेपाली राजनीतिको सन्दर्भमा भने यो भनाइ ठ्याक्कै उल्टोझैं लाग्छ । हालै बीबीसीको साझा सवाल कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रस्तुतिलाई लिएर सामाजिक सञ्जालका भित्ता पक्ष/विपक्षका बहसले भरिए ।
बौद्धिक चोरी र शिक्षा पद्धति
हालै त्रिभूवन विश्वविद्यालयले एमफिल र पीएचडीमा हुने बौद्धिक चोरी (प्लेजरिज्म) रोक्न सफ्टवेयर खरिद गर्ने समाचार सार्वजनिक भएको छ । यसले बौद्धिक चोरीमा बदनाम त्रिभुवन विश्वविद्यालय ढिलै भए पनि यसतर्फ गम्भीर हुन थालेको सन्देश दिन्छ ।
राजधानीको प्रदूषण घटाउने कसरी ?
सडक विस्तार गर्दा बजेटको सुनिश्चितता र मुआब्जालगायतका समस्या हल गरेर मात्रै भत्काउन जरुरी छ ।
दलहरूको आर्थिक स्रोत र पारदर्शिता
सबै दलले एकद्वार बैंक खातामार्फत खर्च र आम्दानीको कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।